समन्वय नहुँदा समस्यामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना « प्रशासन
समन्वय नहुँदा समस्यामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
काठमाडौं । सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवमा राखेका २१ वटा ठूला आयोजनामध्ये चार वटाको मात्रै कार्यप्रगति राम्रो रहेको पाइएको छ ।
गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोशी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना रहेका छन् ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना हाल ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजना २०७५ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । सो आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले आयोजना लक्ष्यअनुरुप नै अगाडि बढिरहेको र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।
यस्तै नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर निर्माण भइरहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कार्यप्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको आयोजना प्रमुख शिवबहादुर बस्नेत बताए । टिबिएम जडान गरिएको ४० दिनमा सो आयोजनाको एक हजार १०० मिटर सुरुङ खनिएको छ । बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
चालु आवको चार महिनासम्ममा कोशी राजमार्गको १५, कालीगण्डकी करिडोरको १२ र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार सरकारले त्यस्ता आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुनुको पछाडि समन्वयको नै अभाव देखिएको बताउछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई दिइएकाले अब प्रगतिको दिशामा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति नै हुन सकेको छैन । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि प्रगति हुन नसक्ने आयोजनाको रुपमा रहेको छ ।
Tags : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना